ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းကနေ ထွက်ခွာဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ရာမို့စ် – MySport Myanmar
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းကနေ ထွက်ခွာဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ရာမို့စ်
စပိန်မှာ ရှိတဲ့ သတင်းဌာနတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ လာလီဂါ အင်အားကြီး အသင်းကြီးတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းရဲ့ ဝါရင့် အသင်းခေါင်းဆောင် ကစားသမား တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဆာဂျီယို ရာမို့စ် ဟာ သူနဲ့ အသင်းကြား ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရာ အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့ လာမယ့်နှစ် နွေရာသီ အပြောင်း အရွှေ့မှာ အသင်းကနေ ထွက်ခွာဖို့ အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ လို့ သိရပါတယ်။ အသက် ၃၄ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ရာမို့စ် ဟာ လာမယ့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့က စတင်ပြီးတော့ အသင်း အသစ်နဲ့ အတူ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးတာမျိုး တွေ ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ကာ ရာမို့စ် ကို ခေါ်ယူဖို့ အတွက် အသင်း တော်တော်များများကလည်း စိတ်ဝင်စားလျက် ရှိနေကြပါတယ်။ ထိုအထဲမှာ ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်းတစ်သင်းကလည်း ရာမို့စ် ကို ခေါ်ယူဖို့ အတွက် စိတ်ဝင်စားနေကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
စပိန် အသံလွှင့်ဌာန တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အွန်ဒါ ဆီရို ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရတော့ ရီးရဲလ်အသင်းရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ရာမို့စ် အကြား အခုချိန်ထိ ညှိနှိုင်းမှုတွေ ရှိနေသေးပေမယ့် နောက်ခံကစားသမား ရာမို့စ် ကတော့ အသင်းကနေ ထွက်ခွာဖို့ စဉ်းစားလျက် ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထိုသတင်းကြောင့် အီတလီ နဲ့ အင်္ဂလန်မှာ ရှိတဲ့ အသင်းတွေ အနေနဲ့ ရာမို့စ် ကို ကမ်းလှမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်သွားဖို့ တာဆူနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရီးရဲလ်အသင်းရဲ့ နည်းပြ ဇီဒန်း ကတော့ ရာမို့စ် ကို အသင်းမှာ ဆက်ရှိနေဖို့ အတွက် မျှော်လင့်နေပေမယ့်လည်း နောက်သုံးပတ်ကြာတဲ့ အထိ အဖြေတစ်ခုခု မပေါ်ရင် ကစားသမားအနေနဲ့ အခြားအသင်းတွေနဲ့ စတင် စကားပြောနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် အသင်းရဲ့ ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ‌ဖလော်ရမ်တီနို ပီရက်ဇ် ကလည်း နိုဝင်ဘာလ လောက်က ရာမို့စ်အနေနဲ့ အသင်းက ထွက်ခွာနိုင်ကြောင်း သဲလွန်စပေး ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် နဲ့ ရာမို့စ် အကြား ညှိနှိုင်းဖို့ရာ အတွက် ခက်ခဲနေတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ ရာမို့စ် အနေနဲ့ အသင်းမှာ နောက်ထပ် ၂နှစ်သက်တမ်းတိုးပြီး ၂၀၂၃ အထိ ကစားချင်နေပေမယ့်လည်း ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းရဲ့ ချမှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒ စည်းမျဉ်းအရ ဝါရင့်ကစားသမားတွေကို ၁၂ လ အထိသာ သက်တမ်းတိုးရမယ် ဆိုပြီး သတ်မှတ် ထားတာကြောင့် သဘောတူညီမှုရဖို့ ခက်ခဲနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ရာမို့စ် အနေနဲ့ အသင်းကနေ ထွက်ခွာနိုင်ချေ များနေပါတယ်။ ပီအက်စ်ဂျီ အသင်းအနေနဲ့ ရာမို့စ်ကို ခေါ်ယူဖို့ အတွက် စိတ်ဝင်စားနေကြောင်း ပြသ ထားပြီး ရာမို့စ် ကို ၃ နှစ်စာချုပ် နဲ့ တစ်ရာသီကို ပေါင် ၁၈ သန်း တန်ကြေး နဲ့ ခေါ်ယူဖို့ အတွက် ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်းကြီး အတော်တော်များများကလည်း ရာမို့စ်ကို ကမ်းလှမ်းဖို့ ရှိနေကြောင်း အသံထွက်ထားပါတယ်။ ရာမို့စ်ကို ၂၀၂၁ မှာ စီးရီးအေ ဒါမှမဟုတ် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ မြင်နိုင်မလား ? ဒါမှမဟုတ် ရီးရဲလ် အသင်းအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မူဝါဒ ကို ချိုးဖျက်ပြီး ရာမို့စ် လိုချင်နေတဲ့ စာချုပ်မျိုး နဲ့ ကမ်းလှမ်းသွားမလား ? ဆိုတာတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
MySport Myanmar2020-12-11T19:46:22+06:30December 11th, 2020|Champions League, Football, La Liga, Premier League, Serie A|